यी हुन् सरकारी जागिर छोडेर कलाकारिता अङ्गालेर सफल बन्ने नेपाली कलाकारहरू हेर्नुहोस् – MeroOnline Khabar
यी हुन् सरकारी जागिर छोडेर कलाकारिता अङ्गालेर सफल बन्ने नेपाली कलाकारहरू हेर्नुहोस्
यी हुन् सरकारी जागिर छोडेर कलाकारिता अङ्गालेर सफल बन्ने कलाकारहरू हेर्नुहोस् : हाम्रो नेपाली समाज मा सरकारी जागिर को महत्त्व उच्च कोटिको हुन्छ ! सरकारी जागिर भनेपछि सरकारी जागिर को सान नै छुट्टै हुने गर्दा छ सरकारी जागिर को मान प्रतिष्ठा इज्जत नै फरक हुने गर्दछ ! उदाहरण को लागी बिहे गर्न जानु पर्‍यो भने केटा को सरकारी जागिर छ भने ल है यसले छोरी पाल्न सक्छ भनेर छोरी दिएका हुन्छन् ! सरकारी जागिर खान पनि हाम्रो नेपाल मा तेती सजिलो छैन आधा उमेर हुन सम्म पढ्यो पढ्यो अनि लोकसेवा को प्रतीक्षा गर्दा गर्दै उमेर ढल्केको पत्तै हुँदैन सरकारी जागिर को महत्त्व कति छ भन्ने बारेमा कुनै ठाउँमा २०० कर्मचारी को माग छ भने ५ हजार जना ले फारम भरेको देख्दा नै थाहा पाउन सकिन्छ !
तर यहाँ यस्तो व्यक्तिहरु पनि छन् ,जसले हुदा खादाको सरकारी जागिर छाडेर कलाकारितामा लाग्ने मुर्खता गरेका छन्। उनीहरुले नराम्रो गर्न खोजे ,यो त बिलकुलै होइन, किनकि मानिसले जुन सुकै काम गर्दा पनि आफुलाई सुहाउने र आफ्नो रुचि के मा छ त्यहि गर्नु पर्छ,अनि मात्र सफल हुन सकिन्छ। हाज हामी सरकारी जागिर छाडेर कलाकारितामा नाम र दाम कमाउन सफल ५ कलाकारहरुको बारेमा कुरा गर्न गईरहेका छौ।
१ – अर्जुन घिमिरे
आफ्नो दाइ आर्मीमै भएकाले संकटकालको समयमा सेनामा भर्ति भएका अर्जुन घिमिरे माओवादी र सरकारविच दोहोरो जनयुद्द चलेको बेला राजिनामा दिएका थिए। त्यसपछि उनले कुमार कट्टेलसंग मिलेर भद्रगोल नामको टेली सिरियल निर्माण गरे। सरकारी जागिर नफापेको उनलाई कलाकारिता भने लक्की सावित भयो। हाल उनि नेपालका एक सफल हास्य कलाकारको रुपमा चिनिन्छन।
२ – दिपकराज गिरि
चलचित्र क्षेत्रका सफल निर्माता तथा सफल कलाकार दिपकराज गिरीलाई पनि सरकारी जागिरले खासै पत्याएन। उनिले जम्मा जम्मी चार दिन असईको तालिम लिएका थिए र गाह्रो लागेर छोडेर भागेका थिए। त्यस पश्चात कलाकारितामा होमिएका उनले आज सम्म पनि पछाडी फर्किएर हेर्नु परेको छैन।
३ – धिरेन शाक्य
धिरेन शाक्य पेशाले ब्रिटिस आर्मी थिए। कलाकारिताको भुत चढ्न थाले पछि उनले सरकारी जागिर छाडेका हुन् । कलाकारिता क्षेत्रमा जीवनका लगभग दुइ दशक पार गरिसकेका उनले चलचित्र चेली बाट अभिनय यात्राको थालनी गरेका हुन्। १९९० बाट कलाकारितामा लागेका उनको पछिल्लो चलचित्र ‘यात्रा ,द म्युजिक भ्लग’ हो जसले दर्शकको निकै राम्रो साथ् पाएको थियो।
४ – तुलसी घिमिरे
तुलसी घिमिरे पनि कलाकारितामा लाग्नु अघि भारतीय सेनामा जागिरे थिए। बच्चै देखिको कलाकारितामा शोख भएको कारणले उनले ६ महिना सेनाको ट्रेनिंग लिएपछि छाडेका थिए। बलिउड ईन्डस्ट्रिजबाट चलचित्र यात्राको थालनी गरेका उनि नेपालि चलचित्रमा स्थापित भए। उनको दक्षिणा, कुसुमे रुमाल, लाहुरे ,देउता ,बलिदान लगायत दर्जनौ सफल र चर्चित चलचित्रहरु रहेका छन्।
५ – प्रशान्त तामाङ्ग
भारतीय चर्चित रियालिटी सो ‘ईन्डियन आईडल २००७ ‘को बिजेता समेत रहेका प्रसान्त तामांग पिताको मृत्युपश्चात कोलकत्ता पुलिसमा भर्ति भएका थिए। नेपालि मुलका भारतीय नागरिक प्रशान्त कलाकारितामा नै धेरै नै व्यस्त हुन थालेपछि सरकारी जागिर छाडेका थिए। उनले थुप्रै नेपालि गीतमा आवाज भरेका छन् भने गोर्खा पल्टन ,परदेशी जस्ता सफल चलचित्रमा समेत आफ्नो अभिनय कला प्रस्तुत गरिसकेका छन्।
← भारतको आगामी प्रधानमन्त्री मोदी बन्ने मतसर्वेक्षणका प्रक्षेपणहरु गलत हुनसक्ने!
अनमोल केसी बलिउडकी श्रीदेबी कि छोरी जान्हवी कपूरसंग फिल्मम इन्ट्री गर्दै ! →
भारतले नेपाललाई थाहै नदिई कोशीमा पानी फर्काउँदा ३ सय नेपाली सम्पर्कविहीन
पाचथर घटनाको नयाँ रहस्य पर्दाफास । १ जनाले ९ जनाको हत्या कसरी गर्न सक्छ?
विप्लव नेकपाले गर्यो भोलि देशभर बन्दको घोषणा (विज्ञप्तिसहित)